I-CZH 500W iTransmitter yeTV ngokuthunga i-eriyali ene-35meters feeder cable cable iseti epheleleyo-i-CZH / Fmuser Fm Transmitter China Umxhasi umfowunelwa: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyuehenge99991
ikhaya » iimveliso » Umdlulisi weTV » Ukudluliselwa kweTV ye-analog » I-CZH 500W iTransmittha yeTV ngokuthunga i-antenna ene-35meters feeder ikhebula elipheleleyo iseti
iimvelisoUmdlulisi weTVUkudluliselwa kweTV ye-analog
iindidi:Ukudluliselwa kweTV ye-analog / iimveliso / Umdlulisi weTV
I-500W TV Transmitter ngokuthunga i-antenna ene-35meters feeder ikhebula elipheleleyo iseti ye-500W TV Transmitter VHF / UHF iTransmit yeTV eyiyo yenziwe kwaye yenziwa, ukuthembeka okuphezulu kunye nexabiso eliphantsi.VHF & UHF.500W.1-mita 19'-rack Profe ...
I-3KW i-Analog TV Transmitter Solid-state single-yetshaneli yeTV iTransmitter yeTV
I-1w ividiyo ehambisa ividiyo engenacingo yasekhaya engenantambo ye-12V AV RF iAudio Car Audio yeaudio kunye nokwabelana ngevidiyo
I-FUTV-9423 DVB-T Transmitter yedijithali esetyenziswe kwi-HD / SD isibonisi sedijithali yeTV yokuhambisa kunye nokusasaza inkqubo
I-FUTV3627 30W yedijithali yeDMMSS Broadbandter yeTVUSUSER TV Transmitter
I-FUTV3627 10W I-transmitter yeTV yeDijithali yeTV
I-FUTV3627 10W yedijithali yeMDS Broadband Transmitter 2500-2700MHZ
I-5W Digital TV Transmitter 470MHz-566MHz okanye i-606MHz-806MHz esetyenziswe kwi-HDTV / SDTV isignali yeTV yedijithali yokuhambisa okanye inkqubo yosasazo kunye nosasazo lwedijithali.
Mirwais 2016/02/03 ngo-08: 10:54
NdinguMirwais kwaye siyinkampani ethengisa izinto ezivenkileni eAfghanistan.
1- Ndidinga amaxabiso ancitshisiweyo kule phakheji.
2- Amaphepha edatha okanye iikhathalogu zento nganye.
3- Iindleko zizonke zokuhambisa eziya eKabul-kwiSikhululo senqwelomoya ngoMoya.
4- Indleko zomntu ngamnye zokuthumela.
Nceda uqaphele, ukuba ndiza kusebenzisa iAli-expression ke nceda uqaphele ukuba xa usenza amaxabiso nezaphulelo.